Nuurka Aqoonta Hido-dhaqameed dhalin kara horusocod, iyo Xadaarad aan guur-guurin!: Maxaa Loogu Isticmaalay Qabiilka Si Khaldan?
Maxaa Loogu Isticmaalay Qabiilka Si Khaldan?
marka hore waa ku mahdsan yahay dhalinta isu xilqaantay bal inay wax ifiyaan oo ay shacabkooda mugdiga ku jira wax ka tusaan si waxaan ay garan la yihiin meel u saaraan oo ay maslaxada mujtamacooda ka shaqeeyaan. waxaan marnaba la hilmaami karin in Dowladihii hore ee Soomaaliya soo maray ay isku dayeen inay bal waxa ummadaan gadaal u wada waxay tahay? laakiin nasib wanaag nin walba sida ay la ahayd ayuu ku dayay.
tusaale Sayid Maxamed wuxuu ku dayay Takuwanaadkii Ijtimaaciga ahaa ee Taagnaa ayuu isticmaalay saa muusan ogeyne, taasna waa fashilisay, inkastoo magaca uu ku dagaalamayay ee uu dartiis u sameysmay uu ku dhisan yahay magaciisa, si kastaba soomaalidu ha ugu muhiimsanaatee qaniinyada kala daadisay.
Maxamed Siyaad Barre (AUN) isaguna wuu isku dayay oo wuxuuba is yiri duug isagoo dhan!!?? ugu danebyntii wuu ku fashilmay oo isagoo wax walba ku hubaysan ayuu qabriga ka soo baxay??
kuwaan hada TFG-da iyaguna waxay dib ugu noqdeen sheekooyinkii 1900-1921 ee Sayid Maxamed, sidaa darteed iyaguna waxay usii socdaan Fashilka dariiqiisii. marka walaalayaal maxaa xal ah, sideese dhibka daawo loogu badali kara?
Ra'yi ahaan aniga ka Saadaat Ahaan waxan qabaa in ay Fududahay ee bal aanu wxogaa dibb u noqono?
Sidaa darteed ayaa waxaa halkaas ka dhalanaya is qab-qabsi Qab-Qableyn iyo iyadoo sharci laga dhigo in Wasiilo walba ama Wadiqo walba loo maro in intaan soo sheegnay qof walbaahi uu noqdo.
Taas Macnaheedu Jaalleyaal Maahan inaysan Dowlad noqon Karin, ee waa noqon karaan ayagaana ugu fudud sidaa daraadeed waxaan mar kale idiin soo diri doonaa sharaxaad kale
Sadat Mohammed Yusuf Geesh
Posted by Nuurin-Hiddeed at 1:43 AM